7 ခြေလှမ်းများအိုင်တီကျွမ်းကျင်မှုဘောင် Edit ကိုနေရာချမှတ်ပေးပါရန် | ကြည့်ရှုခြင်း
7 ဧပြီ 2017
အားဖြင့် Postedဆန်းသစ်နည်းပညာ Solutions
နယူး #IT ကျွမ်းကျင်မှု ဥပမာ, ဒါကြောင့်ထွက်ပရိုဂရမ်းမင်းအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု, အုပ်ချုပ်ရေး, သက်သာခွင့်အဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏မွေးစားနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အဘို့လိုအပ်သည်။ မေးခွန်း "သင်၏ငါ Are ဖြစ်ပါသည်T ကကိုယ်စားလှယ်များလုံလောက်စွာကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်လုံလောက်သောကျွမ်းကျင် viably မြင့်တက်တီထွင်မှု၏မွေးစား, အကောင်အထည်ဖော်မှုစားသုံးမှုနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးအားကောင်းရန်? "
တစ်ဦးအိုင်တီကျွမ်းကျင်မှုဖွဲ့စည်းပုံမှာပေးပို့ခြင်းကြောင့်တာဝန်, စီစဉ်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုယူသောအချက်ကိုကြားမှတစ်ဦးစိတ်ကိုထူးခြားဆန်းကြယ်အရေးယူမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးမှာကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ယေဘုယျပြန်လာ (Roi) ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျပေါရာဏဆန်းသစ်တီထွင်မှုတက်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတူ related ကုန်ကျစရိတ်အလားတူဖြစ်ခြင်းအတိုင်းဤအကြောင်းကိုစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ ပေါရာဏဆန်းသစ်တီထွင်မှုနောက်ဆုံးမှာတိုးချဲ့အကြောင်းကိုတတ်၏ အပိုင်၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် (TCO), ဖြစ်နိုင်သည်ပိုမိုမြင့်မားလုပ်ငန်းလည်ပတ်အသုံးပြုမှု (OPEX) နှင့်လျော့နည်းသွား အသားတင်ပစ္စုပ္ပန်လေးစားမှု (NPV) ။
အိုင်တီကျွမ်းကျင်မှုမူဘောင်ပေးပို့ဖို့အိုင်တီအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နဲ့ငါ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရန်နောက်ဆက်တွဲ, ငါသည်အရာခုနစ်ပါး key ကိုအပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်သို့မဟုတ်အလားအလာအဆင့်သို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထည့်သွင်း။ မှတ်မိဖို့အလွန်အရေးကြီးသည်အရာကဒီလုပ်ဆောင်ချက်သတ္တမခြေလှမ်းမှာအဆုံးသတ်မပါဘူးဆိုလိုသည့်ကြားမှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်း၌အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲမှုမေးခှနျးထုတျဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထုံးစံများတွင်အဖွဲ့အစည်းဘယ်လောက်အချိန်က၎င်း၏အိုင်တီကျွမ်းကျင်မှု set ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အရေးပါသောအညှနျကွားခချိန်ညှိဖြစ်နေဆဲဘယ်လိုပြန်လည်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ခုနစ်လုံးကိုအဆင့်ဆင့်၏တစ်ဦးချင်းစီအောက်ကပိုမှတ်သားဖွယ်အသေးစိတ်အကြောင်းကိုစကားပြောဖြစ်ပါတယ်။
1 Step: အဖွဲ့အစည်းများ၏အရေးပါသောအလမျးညှနျခဆုံးဖြတ်ပါ။
2 Step: မှန်ကန်သောကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်း၏အရေးပါမှုကိုနားလည်ပါ။
3 Step: ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုလက္ခဏာမှအပ်နှံထားပါ။
4 Step: လိုအပ်သည်သောကျွမ်းကျင်မှုဆန်းစစ်ပါ။
5 Step: ကျွမ်းကျင်မှုပြင်ဆင်မှုအကဲဖြတ်။
အဆင့် 6: တံတားကျွမ်းကျင်မှု crevices ။
7 Step: မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုကိုထိန်းသိမ်းပါ။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့, အဖွဲ့အစည်း၏တံခါးသော့ကိုဦးတည်ချက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသွင်ပြောင်းတစ်စင်တာသဘောတရားဖြစ်ပါတယ်။ ၏အနာဂတ်အခွအေနေအဘယ်အရာကိုမ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ဆင်တူ? အဘယ်အရာကိုအိုင်တီကျွမ်းကျင်မှု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းက၎င်း၏အနာဂတ်ပြည်နယ်ပွီးမွောကျကကူညီရန်လိုအပ်သည်? အဆိုပါအိုင်တီအဖွဲ့အစည်းကနေထားချက်အရစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဘာတွေလဲ? ဒါဟာအိုင်တီအဖွဲ့အစည်း၏သူတို့နှင့်အတူ misaligned ခံရရန်အထူးယူနစ်၏ရှုထောငျ့နှင့်မျှော်လင့်ချက်များအဘို့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဘုံပါပဲ။ ကနဦးခြေလှမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏တံခါးသော့ကိုဦးတည်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖွင့်ကောက်နေအကြောင်းပါ။
မှန်ကန်သောကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်း၏အရေးပါမှု, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ရွယ်ကားမောင်းမိတ်ဖက်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အရေးပါသောအလမျးညှနျခအားကောင်းရန်အိုင်တီအဖွဲ့အစည်းကိုအားပေးမှတဆင့်အသိအမှတ်ပြုသည်။ အကောင်းဆုံးအချိန်မှာမှန်ကန်သောကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်း, လက်ခံ actualize နှင့်စီးပွားရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုများအတွက်ဆန်းသစ်စွမ်းရည်တက်စောင့်ရှောက်ဖို့နေရာတစ်နေရာအတွက်အိုင်တီအဖွဲ့အစည်းကိုသတ်မှတ်။ မှန်ကန်သောကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်းအိုင်တီတတ်လွယ်ခြင်းထက်အခြားအရာတစ်ခုခုအကြောင်းပါ။ အိုင်တီကျွမ်းကျင်မှုမူဘောင်ပေးပို့ခြင်း, အထူးယူနစ်တွေနဲ့ပိုပြီးအဆက်မပြတ်အပြန်အလှန်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များနှင့် technique ကိုနားမလည်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ client ကိုအခြေစိုက်စခန်းနှင့်မျှော်လင့်ချက်များကိုသိရန်ပညာရှင်များအိုင်တီလိုအပ်သည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောကျွမ်းကျင်မှု, ဥပမာ, ဆက်သွယ်ရေး, ညှိနှိုင်းမှု, မိတ်ဖက်အုပ်ချုပ်မှု, စီမံခန့်ခွဲမှုတိုးချဲ့နှင့်ဖောက်သည်ဆက်ဆံရေးဟာအုပ်ချုပ်ရေး, တဖြည်းဖြည်းမရှိမဖြစ်သိသိသာသာတက်အကွေ့အကောက်များသောနေကြသည်။
မပို့နေစဉ် အိုင်တီကျွမ်းကျင်မှုမူဘောင်ထိုကဲ့သို့သောသည်အတိုင်းပြုပါရန်အပ်နှံအရာရှိတဦးကစပွန်ဆာနှင့်အကြောင်းမရှိ၏ချန်ပီယံအနေဖြင့်အရေးယူအတွက်လိုအပ်သောတစ်ဦးချင်းစီ၏အားလုံးအားလုံးပါဝင်နိုင်အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့လိမ့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖို့အဖှဲ့အစညျး၏အားလုံးအဆင့်ဆင့်ကိုကျော်တည်ရှိနေသင့်ပါတယ်။ မှတ်မိဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတခုပေးပို့ခြင်းဖြစ်ပါသည် အိုင်တီကျွမ်းကျင်မှုဖွဲ့စည်းပုံမှာ တစ်ဦးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုးတက်မှုလှုပ်ရှားမှုနှင့်မတစ်ဦးသေဒဏ်စီရင်အုပ်ချုပ်မှုအရေးယူမှုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လိုအပ်သောလူများတို့သည်ခေတ္တခဏအားဖြင့်ထိပါးခံစားရကြောင်းချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, ထို့နောက်သူတို့က၎င်း၏ချမ်းသာကြွယ်အာမခံအာရုံစိုက်ခံရဖို့ကပိုဆန္ဒရှိဖြစ်ကြသည်။ ပြုမိနေပါသည်ဘယ်သို့သောအကြောင်းရိုးရှင်းတဲ့အိုင်တီကျွမ်းကျင်မှုမူဘောင်သယ်ဆောင်မှုအတွက်သော့ချက်အောင်မြင်မှု variable တွေကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းများမှန်မှန်ကသူတို့နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းထဲသို့ညှိနှိုင်းဆန့်ကျင်အဖြစ်သူတို့အနေနဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများအရေးယူမှုအဖြစ်ခေတ္တခဏကြိုးပမ်းကတည်းကအိုင်တီကျွမ်းကျင်မှုမူဘောင်သိရှိစေရန်သူတို့ရဲ့တွန်းအားပေးအတွက်လာသောသေတ္တာ။ အဓိကအောင်မြင်မှု variable ကိုလူတွေအနေနဲ့ IT စနစ်သည်ပေးပို့ခြင်းမှကျူးလွန်သူတို့၏ယေဘုယျအချိန်တိကျတဲ့မှုနှုန်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာတိုးတက်မှု crosswise ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်လုပ်တဲ့နယ်မြေများကျော်အဖွဲ့အစည်းအတွင်း၌လိုအပ်သောအလုပ်အကိုင်အစိတျအပိုငျးမှာ gander ယူလိုအပ်သည်။ အရေးကြီးသောကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုသည်၎င်း၏လက်ရှိပြည်နယ်အကဲဖြတ်ရန်နှင့်၎င်း၏အနာဂတ်ပြည်နယ်ထူထောင်ရန်အဖွဲ့အစည်းခွင့်ပြုထားသည်။ တစ်ဖွဲ့လုံးကကျနော်တို့ထူးခြားတဲ့သိမ်းပိုက်အစိတ်အပိုင်းများဒီတိုးတက်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်သုံးမှလေးစင်တာကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အရေးပါမယ့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းအများအပြားလိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ကိုငါသိ၏။ ဒါဟာတိုးတက်မှုတာဝန်ဝတ္တရား၏အစုံအဖြစ်အတော်လေးတူညီနေကြသည်မဟုတ်သည့်အလုပ်အကိုင်အစိတ်အပိုင်းများအပေါ် concentrates ။ သူတို့လက်ရှိအလုပ်အကိုင်အစိတျအပိုငျးနှငျ့ဤသိမ်းပိုက်အစိတ်အပိုင်းများအတွင်းမှလူပေါင်းလုပ်ဆောင်သည့်ဆောင်ရွက်ချက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်လာသောအခါအဖွဲ့အစည်းများမှန်မှန်အနေနဲ့ကံဆိုးအခြေအနေမှာဖမ်းတက်အဆုံးသတ်။ အနာဂတ်ပြည်နယ်အလုပ်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကွဲပြားခြားနားသွားသည်ဤအလုပ်အကိုင်အစိတျအပိုငျးအတွက်လက်ရှိအထွေထွေလူဦးရေထဲကနေ decoupled ခံရဖို့သင့်၏။ အလုပ်အစိတ်အပိုင်းများကလူ crosswise အလုပ်လုပ်တဲ့ပ္ပံကျော်, လာမယ့်ပေါ်သို့, ဒါမှမဟုတ်ပင်ဘေးထွက်တစ်လျှောက်ရှိပြီးတော့တဦးတည်းအဆင့်နှင့်အတူစတင်ရွှေ့ဖို့အတှကျတွေကမှားစရာနှင့်ပြောင်းလဲနေသောလမ်းပေးရသွင်ပြင်လက္ခဏာနိုင်ပါသည်။
အနာဂတ်မှာပြည်နယ်အလုပ်အစိတ်အပိုင်းများသွင်ပြင်လက္ခဏာပြီပြီးတာနဲ့အောက်ပါချဲ့မနေတော့အဖွဲ့အစည်းအတွက်လူများ၏စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာနံပါတ်၏ကျွမ်းကျင်မှုရရှိနိုင်မှုလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ စိတျထဲမှာသိမ်းဆည်းထားပါ: ဤတဲ့ professional တိုးလှုပ်ရှားမှုမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးသေဒဏ်စီရင်အုပ်ချုပ်မှုအရေးယူမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု crevices ခွဲခြားလူတွေကိုအာဏာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုးတက်မှုအဖွင့်များအတွက်အဆင့်သတ်မှတ်။ တစ်ဦးကဆွဲဆောင်မှုကျွမ်းကျင်မှုအကဲဖြတ်တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်မှာ, အထွေထွေအလုပ်လုပ်တဲ့ဇုန်အတွင်း၌နှင့်နောက်ဆုံးအားလုံးတပြင်လုံးကိုအိုင်တီအဖွဲ့အစည်းကတဆင့်မှာကျွမ်းကျင်မှုတွင်းအသိအမှတ်ပြုထည့်သွင်းသင့်၏။
အခုတော့လူတွေတိုးတက်မှုနှင့် set up လိုအပ်သည်သောသော့ချက်ကျွမ်းကျင်မှုမှချိန်ညှိဖြစ်ကြောင်းအစီအစဉ်များပြင်ဆင်နေနိုင်ပါတယ်။ ရှိပြီးသားကျွမ်းကျင်မှု crevices သို့ perceivability ရှိခြင်းတိုးတက်မှုနှင့်ပြင်ဆင်နေလေ့ကျင့်ခန်းတိုးနှင့်အသုံးစရိတ်အစီအစဉ်ကိုပြင်ဆင်နေစကေး၏စီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်ရန်စေ့စပ်ခံရဖို့်၏ဘယ်မှာအကောင်းဆုံးပုံထွက်မှအဖွဲ့အစည်းအာဏာ။ ကျွမ်းကျင်မှုချက်ချင်းလိုအပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ, ဒီအဖွဲ့အစည်းသူတို့အားရှိသည်သောလူများဝယ်ယူရေးသို့မဟုတ်စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုကြသောမှတဆင့်ရရှိခဲ့ရပါမည်သစ်ကိုအဘယျသို့ကျွမ်းကျင်မှုကိုရှေးခယျြကူညီပေးသည် ကျွမ်းကျင်မှု.
ဒါဟာကျွမ်းကျင်မှုအပေါက်ကန့်သတ်များအတွက်ကြားမှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းရဲ့ start ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေတိုးမှတဆင့်အသစ်သောကျွမ်းကျင်မှုရရှိရန်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းပြင်ဆင်နေသည့်အတိုင်းသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ပြန်လည်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသွင်ပြောင်းအဖွဲ့အစည်းများအတွက်တဖြည်းဖြည်းအရေးပါသောအဖြစ်မှထွက်လှည့်အဖြစ်, သူတို့ရဲ့ technique ကိုထိုနည်းတူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ဒါအပေါ်၎င်းတို့၏ဖွဲ့စည်းပုံ, ပုံစံများ, အဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ပြောင်းလဲပေးလိုက်နိုင်အပြောင်းအလဲများကိုလက်မခံကြောင်း, ပါလိမ့်မယ်။ အကျိုးဆက်ဒီအိုင်တီအဖှဲ့အစညျး၏သော့ချက်ကျွမ်းကျင်မှုရရှိနိုင်မှုကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်ဆက်လက်တွန်းအားပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့အိုင်တီကျွမ်းကျင်မှု system ကိုသယ်ဆောင်၌ဤတိုးတက်မှုအောင်မြင်ထားပြီးသောအခါ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများဆုံးယခုလုပ်ခဲ့၏အဖြစ်ရှိပါတယ်။
အိုင်တီအဖွဲ့အစည်းများသူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏တံခါးသော့ကိုဦးတည်ချက်အားကောင်းရန်ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်တွင်မှန်ကန်သောကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်အာမခံရပါမည်။ တစ်ဦးအိုင်တီကျွမ်းကျင်မှု system ကိုသယ်ဆောင်ကျွမ်းကျင်မှု crevices တည်ရှိဘယ်မှာကွဲပြားခြားနားသွားနှင့်ဤတွင်း spanning များအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိနိုင်၏သူတို့ရဲ့အဆင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အိုင်တီအဖွဲ့အစည်းများဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုလိုပဲအိုင်တီကျွမ်းကျင်မှုစနစ်အားတက်စောင့်ရှောက်ခြင်းကြောင့်တစ်ဖန်တစ်ဦးတိုးချဲ့ကျွမ်းကျင်မှု crevice အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်ဖွင့်မစောင့်နေစဉ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့မက်လုံးပေးကမ်းလှမ်းရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
စီမံကိန်းမန်နေဂျာကျွမ်းကျင်မှုကို အသုံးပြု. စီမံကိန်းအဖွဲ့အောင်မြင်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေမလုပ်နည်း
တစ်ခုကသွက်လက်ပတ်ဝန်းကျင် - စစ်မှန်သောဖျတ်လတ်သွက်လက်စေရရှိရန်အတွက်ရန် Key ကို
အပေါ် Posted12 အောက်တိုဘာ 2018